Etu esi lelee dọkụmentị nso nso a na Windows 10 na menu Mmalite | Akụkọ akụrụngwa
Na-achọ akụkụ nke Akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na Windows 10? HRuo oge na-adịbeghị anya ahụtụbeghị m na ihe "Akwụkwọ ndị a na-adịbeghị anya" apụtaghị na menu Mmalite m, nke bụ eziokwu bụ na otu enyi m jụrụ m otu m ga-esi hụ akwụkwọ mepere emepe n'oge na-adịbeghị anya na ọ bụ mgbe ahụ ka m tufuru ihe a.
Dịka m hụrụ ihe a na mbido menu nke enyi ọzọ, echere m na ọ ga-abụ nhọrọ ịhazi ụfọdụ m ga-enwe nkwarụ. Ya mere, mgbe m lechara ọsọ ọsọ, achọpụtara m nhọrọ ahụ agbanyụọ ma ugbu a, m ga-agwa gị otu ị nwere ike isi rụọ ọrụ ya ka ihe ahụ "Akwụkwọ na-adịbeghị anya" pụtara na menu mmalite gị.
1 Adịbeghị anya faịlụ na Windows 10
2 Adịbeghị anya akwụkwọ na Windows XP
Adịbeghị anya faịlụ na Windows 10
Iji nwee ike ịhụ faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ kachasị ọhụrụ na Windows 10, o zuru ezu iji rụọ ọrụ nke na-enye anyị ohere ịme ya. Ma ọ bụ na Microsoft achọghị ichefu na ụdị ọhụụ a nke sistemụ arụmọrụ a ma ama na nhọrọ a bara uru na karịa.
Nke mbụ emeghe Windows 10 ntọala menu, nke ị nwere ike ịnweta site na Start Menu ma ọ bụ site na Windows + i key ጥምረት. Ozugbo ị gafere, gaa na ngalaba “Nkeonwe”.
Ugbu a họrọ "Malite" ma rụọ ọrụ nhọrọ "Gosi ihe ndị emepere n'oge na-adịbeghị anya". Ọ bụrụ na ịgbanyeghị ya, ịgaghị enwe ike ihu faịlụ na dọkụmentị ndị ị mepere na Windows 10.
Ọ bụrụ na anyị gosipụta mmalite Nhọrọ ma họrọ otu ngwa, na nke anyị Microsoft Excel, site na ịpị bọtịnụ aka nri anyị ga-enwe ike ịhụ faịlụ ndị emeghere n'oge na-adịbeghị anya.
Adịbeghị anya akwụkwọ na Windows XP
Pịa na menu mmalite wee pịa bọtịnụ aka nri pịa mpaghara nweere onwe ya na ogwe aka na-acha anụnụ anụnụ na ala menu. Ga-enweta obere windo na-ekwu "Njirimara". Lee anya na foto a:
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyogho gara aga, ihe ahụ bụ “Documents na nso nso a” apụtaghị na menu.
Debe pointer n'elu windo ahụ kwuru "Njirimara" wee pịa otu oge. Window na-eso ga-apụta:
Pịa na bọtịnụ "Hazie" na windo ahụ ga-emepe, họrọ taabụ "Nhọrọ dị elu".
Ugbu a ị ga-enyocha igbe "Gosi akwụkwọ ndị emepere n'oge na-adịbeghị anya" wee pịa "OK", windo ahụ ga-emechi. Dịka windo "Taskbar na Start Njirimara Njirimara" ka ga-emeghe, pịa "Tee" wee "OK" imechi ya.
Ugbu a ị nwere ike ịhụ akwụkwọ gị na-adịbeghị anya site na mmalite menu:
PN'ikpeazu, cheta na ọ bụrụ na ị chọghị ka mmadụ hụ akwụkwọ ndị ị mepere n'oge na-adịbeghị anya, ị nwere ike ihichapụ ndepụta ahụ. Iji mee nke a, megharịa usoro 1 ruo 3 na otu ugboro na taabụ "Advanced options" nke windo "Hazie menu mmalite", ị ga-pịa bọtịnụ "Hichapụ".
RCheta na nke a agaghị ehichapụ dọkụmentị i jirila na nso nso a, ọ ga-ehichapụ ha na ndepụta "Documents nso nso a" ma mgbe ị jiri ya ọzọ, ha ga-apụta ọzọ na ndepụta a.
EEnwere m olile anya na ịchọta nkuzi a bara uru iji hụ Windows 10 faịlụ ugbu a na XP. Vinegary ekele.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na Windows 10
Ihe 65 kwuru, hapụ nke gị
Ndewo Alejandro, na ụbọchị ole na ole m ga-agba mbọ idozi obi abụọ gị banyere ebumnuche ahụ, anyị ga-ahụ etu esi edekọ ya na otu esi edozi ụda ahụ.
Daalụ maka ịza ajụjụ, ọ na-enwe ekele. Daalụ.
hello mmanya, taa m zutere peeji gị na-asọfụ ịntanetị ma ọ dị ka ọ na-atọ ụtọ ma ọ dịkarịa ala maka obere ihe m hụrụ, echere m na ndụmọdụ gị niile ga-abara m uru, ewerela m usoro iji nweta mmewere nke nso nso a. akwụkwọ na ọ dị m ka ọ bara ezigbo uru, achọrọ m ịgwa gị na achọtara m gị n'ihi na m na-achọ ozi gbasara njikwa nke ọkpụkpọ kpochapụwo ahụ, ahụla m ihe ị kọwara maka ntinye ma ọ dị ezigbo mma, kedu Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka kụziere m ijikwa nhọrọ nke ndekọ cd nakwa na olu ahụ dị n'otu abụ niile ebe m chịkọtara ha site n'ọtụtụ isi wee nwee ọtụtụ mpịakọta, n'ihe banyere ịnụrụ ha na ihe ọkpụkpọ a nsogbu adighi ebe obu na i kwuru na a na-etolite olu ya ka o gwuo egwu ma gaa tax ka m ga esi? M ga-enwe ekele maka nkwado gị, hụ gị n'oge na-adịghị anya
Daalụ maka aghụghọ ahụ amaghị m na ị nwere ike ịhụ akwụkwọ m adịbeghị anya. Nwere ma ọ bụrụ na ị na-etinye usoro aghụghọ nke ọma nke ọma. Ekele si Caracas.
Ndewo Maroon, Obi dị m ụtọ na aghụghọ ahụ baara gị uru. Aga m anọgide na-etinye aghụghọ ọzọ, n'ihi na ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ dị ha ka ọ dị mfe, ọ bụghị mmadụ niile maara ha ma ugbu a gị, dịka ọmụmaatụ, ị maraworị ihe ị ga-eme iji gosipụta akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya, nri? Gaa na Vinagre Asesino maka inwe obi abụọ banyere IT. Daalụ.
ada chula dijo
ndewo mara mma ... daalụ maka ndụmọdụ gị. ogologo oge gara aga enyi m nwoke mechiri mụtara, na nso nso a na echiche na ọ gaghị ahụ ihe ọ mere n'abalị ... ekele gị ama m amalarị ... nsusu ọnụ ma daalụ.
Zaghachi nenita chula
Oops Echere m na ị ga-etinye ihe iji hụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ ka mma n'ụzọ a, daalụ.
Hola ada chula ị hụla na enwere ndị anaghị achọ igosi ihe dị na dọkụmenti nso nso a. Gịnị kpatara ya? Ugbu a ị maraworị otu esi ahụ ha ma ọ maghị na ị hụrụ ha 😉
Hola Pedro Enweghị ihe ị ga-etinye iji lelee akwụkwọ ndị ị mepere n'oge na-adịbeghị anya. I huru mfe? Ekele m unu niile.
M nwere XP Colossus arụnyere, na eziokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma e wezụga n'ihi na ihe ole na ole dị ka na m ike na-egosi na-adịbeghị anya faịlụ, ọbụna nhọrọ na-enyere ya aka site na mmalite m button dị ka kọwara n'elu. O doro anya na edegharịrị ya na faịlụ ndekọ. Ajụjụ m, ị maara ka esi eme nhọrọ a?
Ebe ọ bụ na enweela ekele.
hello mmanya: nchọgharị achọtara m peeji gị n'ihi na ọ masịrị m ịmụ ọrụ kọmputa na ọ dị ka akọwara nke ọma, ị dị mma dịka onye nkuzi n'ihi na ị na-akọwa n'ụzọ dị mfe ma doo anya site na nkwụsị. Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị.
Nabata Mauricio, enwere m olile anya na ị ga-aga na blọgụ ahụ yana ị na-anụkwa edemede gị. Daalụ.
hello, na-adọrọ mmasị na nke faịlụ ndị a na-adịbeghị anya mana enwere m nsogbu ... na pc m na mmeri x sp2 naanị m nwetara faịlụ ikpeazụ 3 na-adịbeghị anya, ebe na pc n'ọfịs enwere faịlụ 10 na-emekarị ma na-arụ ọrụ nke ukwuu ka ndị enyi ee ị na-agwa m otu m si eme ka enwere ike ihu faịlụ 10 ma ọ bụ karịa na pc m, daalụ maka ị zitere m ozi. ka ọ dị
German bụ oge mbụ m gụrụ nsogbu yiri nke gị. Ọ dị obere, ha na-apụtakarị ma ọ bụ na ha apụtaghị, mana naanị ụfọdụ akwụkwọ anaghị apụta. Aga m ahụ ma m chọta ozi ọ bụla. Echiche kacha mma.
Ndewo mmanya m nwere nsogbu na akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na ọ bụ na mgbe m soro ntuziaka gị n'akụkụ ala nke nhọrọ iji gaa n'ihu, nhọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya apụtaghị na m merie xp
roanfo nke n’eji otutu ndi ozo n’abia oria virus. Ngwọta ahụ adịghị mfe yana enweghị m ike ịtụkwasị obi na faịlị na-edozi ya ya enweghị m ike ijikọ ya. Ndo ma ọ bụrụ na achọtara m ihe mara mma.
ndewo, achọrọ m enyemaka iji wepu onye ọrụ nchịkwa, gịnị ka m ga - eme?
Zaghachi ka ijikọ
Obi dị m ụtọ na m hụrụ ndị dị ka gị. Enwere m nsogbu nke enweghị ike ịgbalite akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya, emeelarị m ya site na nzọụkwụ mana windo apụtaghị m dịka nke gị nke nhọrọ dị elu, akara aka dị n'okpuru anaghị egosi na ekwu «Họrọ nhọrọ a… . o bukwa obere igbe ebe “Show ......” na aru oru, igbe ahu nile putara ihe .. nyere m aka biko, gini ka m ga eme?
LETI nsogbu gị bụ na nje gbanwere ndekọ Windows. Ikwesiri igbanwe ya ozo ma odighi nfe. Enwere ike ime nkuzi.
Enwere m nsogbu nke enweghị ike ịgbalite akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya, emeelarị m ya site na nzọụkwụ mana windo apụtaghị m yana nke gị nke nhọrọ dị elu, akara aka dị n'okpuru anaghị egosi na "Họrọ nhọrọ a… . o bukwa obere igbe ebe “Show ......” na aru oru, igbe ahu nile putara ihe .. nyere m aka biko, gini ka m ga eme?
mee nkuzi kachasị ọsọ iji hụ ma m meziri nsogbu ahụ
Ahụghị m nhọrọ iji kwado akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya. M gbasoro usoro ahụ dị ka egosiri mana nhọrọ ahụ apụtaghị
Zaghachi ka yakaroe
Ndewo, nkuzi ahụ bụ naanị ihe m na-achọ mana nhọrọ iji rụọ ọrụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya apụtaghị, lee ma ị nwere ihe ọmụma banyere ikpe ahụ ma nye anyị obere aka.
Zaghachi Fatima Sanchez
hello, agbasoro m ntuziaka site na nzọụkwụ. gosi iji gosipụta akwụkwọ ndị a na-adịbeghị anya, mana na kọmputa m nhọrọ ahụ ị na-egosi: "Gosi dọkụmentị mepere n'oge na-adịbeghị anya" apụtaghị. O nwere uzo ozo eji eme ya ???
Daalụ nke ukwuu !!!
Mike @ ezuru dijo
Ndewo ọma !! Ezigbo mma Mmanya niile. M na-agwa gị na m nwere nsogbu na ndepụta nke faịlụ ndị na-adịbeghị anya, Sistemụ arụmọrụ bụ Windows Vista Business. Ihe na - eme bụ ihe ndị a: ọ naghị emelite ndepụta ahụ! Ozugbo m hichapụ ndepụta ahụ, ọ “juru” ọzọ ma site ebe ahụ ọ naghị edepụta akwụkwọ mmeghe ikpeazụ.
Enwere m olile anya na m kọwawo nke ọma na ị ghọtara ihe m na-achọ ịgwa. N'otu ụzọ, ana m ekele gị nke ukwuu. Ọnwa i nyeere otutu aka na otutu oge.
Zaghachi Mike @ itcs
Otu ma mkpa. Daalụ.
Ndewo, usoro aghụghọ ha hapụrụ dị m ezigbo mma.
N'ebe a, enwere m nsogbu maka ha ka ha hụ ma ọ bụrụ na ha na-emekọrịta ihe m nwere laptọọpụ acer 4720z na ndị ọkwọ ụgbọala na-ada ụda anaghị etinye m m ebudatara ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na enweghị ihe m ga-ahụ ma ọ bụrụ na ha enyere m aka na nke a eziokwu m riri hapuru obere nsogbu ahu
Naanị otu akụkụ nke enweghị m ike ịghọta bụ na nhọrọ a apụtaghị na menu m, ị maara ụzọ ọ bụla iji kpochie Windows ka ọ pụta ọzọ?
Nnọọ, ahụrụ m ihe ị kọwara maka "Akwụkwọ dị ugbu a" na nke m enwere m ya na mbụ, okwu a bụ na n'ọnọdụ m ehichapụ ya ma nhọrọ nhọrọ anaghị apụta, kedu ka m ga-esi nweta "Akwụkwọ ndị a na - adịbeghị anya" Bịa menu mbido ọzọ? imeela nnọọ mma nke gị.
Gị, nke Gị dijo
magburu onwe onyinye ,,, Amaghị m ogologo oge ọ na-yi ma ọ bụ oké,
Ndewo, ihe niile dị ezigbo mma ma dịkwa mfe, mana nsogbu m nwere bụ na nhọrọ nke akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya apụtaghị, ohere ahụ enweghị oghere, n'efu. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Anọ m n'otu ọnọdụ ahụ Felix na tutus. Nhọrọ a gosipụtara oghere. Olileanya na ị nwere ike inyere anyị aka.
M nwere ike ime. ọ bụrụ na ị nwere mmasị, gwa m. Ndi otu m bu Xp.
Enwere m windo windo na-enweghị akwụkwọ ntinye akwụkwọ na nso nso a. Kedu ka m ga-esi rụọ ọrụ ya?
Zaghachi na MANOLO
Daalụ maka enyemaka nke inwe ike ihichapu ozi na pc m
Zaghachi jorge luis m
Ndewo, nsogbu m bụ na enweghị m ike ịhụ folda ahụ = Akwụkwọ na-adịbeghị anya na C: Documents na Settings All Users and it is not hidden, what can I do? Ọ dị ka a ga - ehichapụ folda ahụ mana na mbido ọ bụrụ na akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya dị ma ọ bụghị na diski C, biko nyere m aka, n'ọdịnihu ekele, ekele
Nnọọ! daalụ maka ibe gị M gbasoro ntuziaka ị na-enye ma m hụchaa akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya.
Zaghachi na chiquinquira
hello well a question anaghị abịa kwụpụ 3 maka "Gosi akwụkwọ ndị emepere n'oge na-adịbeghị anya" Agaghị m elele ya n'ihi ??? Echere m azịza gị daalụ.
mana m tinyere email m na-ezighi ezi
hello M na-achọ iwu iji mezuo, na ntinye ederede ma ọ bụ jiri iwu iji mepee folda akwụkwọ na-adịbeghị anya ozugbo, ị nwere ike? Daalụ.
maka nhọrọ akwụkwọ na-adịbeghị anya ịpụta ka m mere ihe ị gosiri mana na nhọrọ nhọrọ dị elu ihe metụtara akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya apụtaghị
Ndewo mmanya, ibe gị nke m matara dị ezigbo nkuzi, ọ dị nwute na isiokwu ahụ enyereghị m aka n'ihi na nhọrọ "Akwụkwọ AKA NA-EME" apụtaghị na PC m na windo windo. Daalụ site n'ụdị niile na ekele
Zaghachi PEDRO M
Carlos Ma ọ bụ dijo
N’ELU N’ỌD W M MGBE M NA-EME ỌRPT NDV NA-EME ỌM IMA, MAGH APGHPE NT OP TOTA AH TO KA MGBE GOSIRI M Akwụkwọ NDOC NA-adịbeghị anya
Zaghachi CARLOS O
I meela ezigbo enyi, achọrọ m ịma nke a iji mee ka onye ọrụ jụrụ m.
jiri ịhụnanya Afinca Melano
Zaghachi Afinca Melano
ONYENWE ANY K NA-EGBU
Nyere m aka!
Enwere m epson lq 1070+ esc / p2 na ngwa nbipute ma ọ naghị ebipụta ya na sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Mgbe ị na-eme nyocha akwụkwọ ntuziaka ọ na-ebipụta nke ọma.
Enwere m ekele maka mmekorita gị
ledi paola dijo
ekele maka nnukwu trukitoo jijijijiji
Zaghachi leydi paola
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na “Gosi akwụkwọ edere n’oge na - adịbeghị anya” apụtaghị na ị tụgharịrị na ntinye # 3? Agbalịrị m ime ya site na iji gpedit.msc mana enweghị m ike ịhụ faịlụ ọ bụla ejirila ...
Daalụ maka ntinye. Anọ m na-achọ ozi a ogologo oge.
Site n'isiokwu a, ọ ga-adị mkpa ịmara ebe anyị nwere ike ịchọta kpọmkwem ọnọdụ nke folda nwere, ebe ọ bụ na ọ bụghị ebe niile ka ị na-agwa anyị, ma ọ bụ na enweghị m ya. Ọ dịịrị m mfe mgbe niile ịchọta folda a, mana ugbu a m kpụrụ igwe, enweghịzi m ike ịchọta ya. Enwere m olileanya na ị nwere ike ịgwa m ihe m nwere ike ime iji mee ka ọ pụta na ndekọ ndekọ m, ebe nchekwa folda onye ọrụ adịghị ebe ahụ.
Ekele na ekele n'ọdịnihu.
Zaghachi na ROBERTO CASTILLO
Ndewo, ọ na - eme na enwere m cd foto nke ezumike m, achọrọ m ka ihe ọjọọ na - apụ n'anya, mana foto ndị ahụ dị na ndekọ aha, ya bụ na sayLỌ -> DOCUMENTS, enwere foto niile, ma ọ bụ Imirikiti, echekwara m na m nwere ike iweghachite ha, mgbe m pịa otu n'ime foto ndị ahụ ọ na-ajụ m itinye diski na draịva E (ya bụ, itinye m cd furu efu), mana ajụjụ m bụ, enwere m ike ịhụ foto ndị ahụ that are in START -> DOCUMENTS without put the cd nke m doro anya na agbaghara ??, daalụ
David Best dijo
Waoooooooooooooooooooo !! Amaghị m ihe kpatara m ji enwe nkụda mmụọ ebe ọ bụ na Daviid anọghị ebe a! Ihe Agbanwego ..
Ọ dị mma nke ukwuu. Mana, echere m na ọ bụ ntakịrị ihe ị na-akọwa ihe dị obere nke nwatakịrị dị afọ 5 nwere ike ime ya naanị site n'ịgụ na nyocha ntakịrị.
Thenfọdụ na-echezi ihe ị na-eme ebe a "gilipoyas" ọ bụrụ na ọ bụ elementrị hahaha ps ee ọ bụ elementrị na m na-aga web na-achọ ọgbakọ ma ọ bụ webs ịhapụ okwu m banyere ihe m chere.
Onye ọ bụla na-adịghị amasị na; ọ ^, ^
Victor Abụghị m ọkachamara n'okwu a. ma echere m na n'ọnọdụ gị ee, i tufuru cd na pc gị anaghị edebe otu faịlụ ị gaghị enwe ike ịhụ foto = '(..
hey daalụ nke ukwuu maka aghụghọ a ọ kachasị mma, n'ihi na nwanne m nwoke ga-egbu m ...
Ndewo mmanya, taa m hụrụ saịtị gị ma achọrọ m ịjụ gị na isi gwa gị na nhọrọ ahụ apụtaghị nye m, ọ bụ karịa mgbe nhọrọ mbụ naanị mmanya na-acha ntụ ntụ na-egosi dị ka ụdị XP m enweghị doc. na-adịbeghị anya
Ikwesiri idezi windo ndekọ windo, maka nke a ka anyị meghere regedit (site na mmalite menu, gbaa ọsọ, regegit)
Ka anyị gaa na igodo ndị a na ndekọ windo:
Gbanwee na ndebanye aha maka XP COLOSUS
N'ebe ahụ anyị ga-agbanwe usoro nke igodo ahụ n'ụzọ dị otu a:
'NoRecentDocsHistory' ----> nke a na «1» anyị gbanwere ya «0»
'NoRecentDocsMenu' ——-> dị na «1» anyị gbanwere ya «0»
Anyị malitegharia pc ahụ, folda akwụkwọ na-adịbeghị anya pụtara ọzọ na mbido menu 😀
magburu onwe gị nkuzi gị nyeere m aka nke ukwuu
ekele maka enyemaka na isiokwu nke akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na menu mmalite.
Ọ baara m ezigbo uru.
Cheregodi, ihe m chọrọ ịmata bụ na ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọ bụla a ga-esi ahazi akwụkwọ ndị a mere ọfụma ka ha chekwaa "okwu docs.de" ọ bụghị ndị ọzọ dịka egwu na vidiyo..etc. Daalụ n'ọdịnihu.
Daalụ nke ukwuu maka nkọwa mmanya na ndịna-emeputa na-egosi mfe dị mma
Ezi ekele dị ukwuu maka ozi ahụ, mana m na-anwa ịme usoro ndị ahụ na nhọrọ iji mee ka akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya apụtaghị. Mgbe m mere ihe ahụ dị n'elu, m ga-aga na Advanced Options taabụ, naanị m ga-enweta nhọrọ ma ọ bụ "Ngwa mmalite mmalite" igbe ma ọ bụghị akụkụ ala. Daalụ .. !!!
onye okwu! dijo
Kedu ihe na-eme, aghụghọ a dị mma, mana, anaghị m ahụ nhọrọ ahụ itinye akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya, kedu ka m ga-esi mee ya?
Zaghachi na haqker!
Ọ BINRIN M nwere otu nsogbu ahụ, mana ọdịiche ahụ bụ na anaghị m enweta nhọrọ iji gosi akwụkwọ ndị a na-adịbeghị anya… M KWES ALLR ALL YOULỌ NKE YOU NA-EKWU MA MGBE M BACR O MGBE MGBE AHV M NA-AD DONGH TO M 'Mara' Nyere m PORFISSS
hello Enwere m otu nsogbu ahụ dị ka yoeslin, nhọrọ ahụ apụtaghị. ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye m nhọrọ ọzọ ana m ekele gị nke ukwuu
Ndị na-ahụghị nhọrọ nke 'akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya'
o yikarịrị ka ha ahọrọla nhọrọ nke abụọ nke Start Menu, ya bụ, 'Classic Start Menu'. Ọ bụrụ na ha gbanwee ya na nhọrọ nke mbụ dị ka egosiri na windo nke abụọ nke obere nkuzi, ebe ahụ ka ha ga-agbaso ntuziaka ndị ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere ike ịlaghachi na menu ha maara.
Maria Elena Zidar dijo
Akwa nkọwa !!! M mere ya 🙂 ekele
Zaghachi María Elena Zidar
Nnọọ; Daalụ n'ezie !! O nyerela m aka taa, amaghị m otu esi achọta akwụkwọ m adịbeghị anya.
Wayzọ ọzọ iji hụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya bụ site na isoro athzọ ndị a
C: Documents and Settings and your Recent username, if if this folder is not seen you go the Folder Control Panel Nyochaa taabụ ị nwere ike igosi faịlụ niile na folda zoro ezo - >>> ị nabatara na ọ bụ ya
Zaghachi Paola Munoz
Tesla ga-emepe ụlọ ahịa mbụ ya na Spain na Barcelona
Iji Razer Basilisk òké, ị ga-enwe obi ụtọ na Fps dị ka dwarf ekele maka ịkpalite ya